विधान तोड्दै देउवाले गरे संसदीय बोर्डको भागबण्डा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
विधान तोड्दै देउवाले गरे संसदीय बोर्डको भागबण्डा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले १७ सदसीय संसदीय समिति गठन गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सहमतिमा समिति गठन भएको हो।
समितिमा कांग्रेस सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष प्रदेश सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसमा उपसभापति, एउटा महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन हुन बाँकी रहेकाले तीन जना मात्र पदेन सदस्य छन् । विधान त बाँकी ८ सदस्य मनोनयन गर्नु पर्नेमा देउवाले १४ जना मनोनयन गरेका हुन । समितिलाई भागवण्डाको आधारमा टुंग्याइएको हो । देउवाले नेता पौडेल पक्षलाई ४ सदस्य दिएका छन् । पौडेल पक्षबाट महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला र कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव पदेन सदस्य छन् । उनीबाहेक पौडेल पक्षबाट स्वयं पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत र महेश आचार्य सदस्य बनेका छन् ।
त्यस्तै खुमबहादुर खड्का समूहलाई दुई सदस्य दिइएको छ । खड्का समूहबाट स्वयं खड्का र पूर्णबहादुर खड्कालाई सदस्य बनाइएको छ । त्यस्तै नेता कृष्ण सिटौला समूहबाट उनै सिटौलालाई सदस्य बनाएका छन् । भने संस्थापन पक्षबाट देउवाले ६ जनालाई सदस्य बनाएका छन् । संस्थापन पक्षबाट गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँण र चित्रलेखा यादवलाई सदस्य बनाइएको छ ।
विधानको धारा ३१ (१)ले केन्द्रीय समिति मधयबाट एक संसदीय समिति गठन गर्ने उल्लेख गरीएको छ । सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार बढिमा आठ जना सदस्य कार्यसमितिले चयन गर्न उल्लेख छ भने संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य रहने छन् ।
समितिले नै पार्टीको तर्फबाट प्रदेश र केन्द्रको उम्मेदवार टुंगो लगाउने छ । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न हुने प्रदेशको केन्द्रको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट मैदान उतार्ने उम्मेदवारको टुंगो कांग्रेसले असोज २७भित्र लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पार्टी पदाधिकारी र सबै निकायहरुलाई पूर्णता दिइसक्नु पर्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सभापति देउवाले अझै उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीसहितका पदाधिकारी र पार्टीका निकायहरुलाई पूर्णता दिनसकेका छैनन्। समितिको पहिलो बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाभित्रै सरकारको काम प्रभाव...